उपत्यकामा आगामी जेठ १३ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप ! कुन समयमा के–के गर्न पाइन्छ ? – hamrosandesh.com
उपत्यकामा आगामी जेठ १३ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आजको बैठकले आगामी दुई साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । कोभिड १९ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो रहेकाले निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु परेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको आदेशामा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लव, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लव, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना र दर्शकसहितको खेलकूद सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन ।
अत्यावश्यक सेवामा तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, बीमालगायतका कार्यालयले न्यून कर्मचारी उपस्थिति हुने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा २५ प्रतिशत कार्यालयहरु खुला गर्न र २० प्रतिशत जनशक्ति मात्रै राख्न आदेशमा भनिएको छ । सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैक र प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ ।
सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्धारा जारी गरिएको पास र परिचयपत्रको आधारमा आवतजावत गर्न पाइने छ । सार्वजनिक संस्थाको हकमा सम्बन्धित प्रमुखले जारी गरेको पास र परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाका सवारी साधन सञ्चालनको हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंँक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिन भनिएको छ ।
फुटपाथ, साइकलसहितका सबै व्यवसायमा रोक लगाइएको छ । विवाह, व्रतबन्ध होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न रोक लगाइएको छ । घरमै उक्त कार्य गर्दा दश जना भन्दा बढी उपस्थित हुन नपाइने आदेशमा भनिएको छ । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाइने छ । रासस